Nhasi pamisangano yeApple zvakare zvakare kumeso-kumeso muEurope | IPhone nhau
Nhasi pamisangano yeApple vakatarisana-ne-kuEurope zvakare
Apple inogadzira zvigadzirwa zvikuru, uye chii chakanyanya kukosha: inoita mishandirapamwe huru yekushambadzira kutengesa zvigadzirwa zvayo ... Asi haisi chete inoshandisa nzira dzinozivikanwa dzekushambadzira, mureza, kana Apple Chitoro, iwo kuratidzwa kwayo kukuru. Apple Zvitoro kwatinogona kubata, kuravira, uye kudzidza kubva kune yega Apple chigadzirwa. Uye ini ndinoti dzidza nekuti kwenguva yakati Apple yanga yakabata Nhasi pazvirongwa zveApple, zvikamu zvavanodzidza kushandisa zvigadzirwa zvavo nenzira inonakidza uye yekugadzira. Iyo yekumeso-kumeso modhi yakamiswa nekuda kwe COVID asi isu tinogona ikozvino kudzokera kumeso-kumeso Nhasi pane zvikamu zveApple muEurope.
Sezvatinotaura, zvikamu zve Nhasi kuApple vakatarisana-ne-chiso zvakare. Zvimwe zvikamu izvo zvenguva Apple zvave kuda kutangazve zvikamu muzvitoro zvepanyama zve Spain, United Kingdom, France, Germany, Netherlands, Italy, Turkey, uye Brussels. Nyika idzo, nekuda kwekurambidzwa uye nemamiriro echirwere ichi, vakaita kuti zvikwanise kudzokera kuzviitiko zverudzi urwu. Uye chokwadi ndechekuti inhau huru ... Pakupedzisira iri zvinonyanya kunakidza kugona kunakidzwa nemhando idzi dzezvikamu mumunhu pane zvirinani, sezvo iwe zvakare uine mukana wekushandisa zvigadzirwa zvinopihwa neApple kana iwe usina zvese zvaunoda pachikamu chakasarudzwa.
Nhau huru dzinoita sedziri kugamuchirwa kwakanaka, tichiongorora zvikamu zvakavhurika zvemazuva mashoma anotevera muMadrid tinoona kuti vangani vatokwana. Saka kana iwe uchifarira chero chazvo, mhanya kuchengetera nzvimbo yako. Takave nemukana wekuenda kune akati wandei uye chokwadi ndechekuti iwe unodzidza uye ivo vanowanzoitirwa zvakanaka kwazvo nevashandi veApple Chitoro. Uye newe, Wakambopinda chero nhasi paApple chikamu? Aya matanho echiratidzo anonakidza kwauri here? Takakuverengerai ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Store » Nhasi pamisangano yeApple vakatarisana-ne-kuEurope zvakare
Eve Smart Radiator Thermostat Inosimudzira NeRutsigiro Rutsigiro
11/XNUMX: aya ndiwo mararamire aiita White House, yava kuwanikwa paApple TV +